Akhriso+Dhageyso Magacyada Dadkii Lagu Xasuuqay Weerarkii Mareykanka Ee Duleedka Jilib. – Bogga Calamada.com
Akhriso+Dhageyso Magacyada Dadkii Lagu Xasuuqay Weerarkii Mareykanka Ee Duleedka Jilib.
August 17, 2017 8:21 pm Views: 748
Burbur Ka Muuqda Guriga La Duqeeyay
Tuulada Amed Yare oo qiyaas ahaantii 15km koonfur-bari kaga beegan degmada Jilib ee gobolka Jubada dhexe ayaa xalay goobjoog u noqotay xasuuqii ugu foosha xumaa ee Mareykanka uu ka geysto Soomaaliya tan iyo markii hogaanka wadankaAS uu la wareegay Donald Trump, Aag-dagaalna kaga dhawaaqay koonfurta Soomaaliya.
Weerarkan bahalnimo ayaa lagu xasuuqay ugu yaraan 7 ruux oo hal qoys ka soo wadajeeda, Waxaana sidoo kale lagu burburiyey dhismihii ay tuulada ka daganaayeen. Weerarka wuxuu dhacay xilli saqdhexe ah oo qoysku wada hurdayey.
Mas’uuliyadda gummaadkan waxaan sheegtay taliska ciidamada Military-ga Mareykanka ee Africa ee loo yaqaano AFRICOM kuwaas oo warsaxaafadeed rasmi ah oo ay soo saareen ku sheegay in saddex weerar oo duqeyn ah oo “la hubo” in ay ka fuliyeen duleedka Jilib, Kuna dileen ugu yaraan 7 dagaalyahan oo ka tirsan Xarakada Al-Shabaab.
Warsaxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda warfaafinta ee DFS ayaa isna lagu sheegay in weerarkaas uu ansixiyey Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Madaxweynaha DFS, Islamarkaana saaxiibadooda Mareykanka ay kala qeyb qaateen gummaadkaasi. Waxay iyagana sheegeen in 7 dagaalyahan oo ka tirsan mintidiinta in lagu dilay weerarkaas waa sida ay hadalka u dhigeene.
Qoys Magac iyo Taariikh Ku Leh Deegaanka
Laakiin marka aan dib ugu soo noqono tuulada Axmed Yare, Xaqiiqda taalla deegaanka waa mid gabi ahaanba ka duwan sheegashooyinka Mareykanka iyo dabadhilifyadiisa Soomaalida ah.
Weerarka waxaa lagu xasuuqay qoys caan ah oo magac iyo taariikhba ku leh tuulada iyo guud ahaan magaalooyinka ku xeeran. Taasi waxaa ka marqaati kacay boqolaal dadweyne ah oo maanta isaga kala yimid Jilib, Kamsuuma iyo dhamaan tuulooyinka, kana qeybgalay aas wadareedkii la soo sameynayey qoyska dhibaatadu gaartay.
Dadka lagu dilay xasuuqan uurdooxa ah waxaa ka mid ahaa Sheykh Maxamed Sheykh Axmad Yare oo ahaa Aabihii reerka, sidoo kalena ahaa ninka ugu da’da weyn qoyska la xasuuqay. Wuxuu ahaa Nabadoon caan ah oo laga yaqaano tuulada iyo guud ahaan deegaanka.
Waxaa tusaale kuugu filan magaca tuulada oo la yiraahdo “Axmad Yare” waxaa loogu magacdaray Aabihiisa oo ahaa Sheykh Caan ah oo laga yaqaano gobolka, kana mid ahaa dadkii ugu horeeyey ee tuulada aas-aasay.
Sawirka Sheekh Muxamed Sheekh Axmed Yare
Magacyada 7-dii qof ee lagu laayay weerarkii Tuulada Axmed Yare
1-Sheykh Maxamed –Allaha U Naxariistee- waxaa lala dilay xaaskiisa oo lagu magacaabi jiray:
3-Aabe Adeerkiisa ahaa, sidoo kalena dhalay Xaaskiisa oo la yiraahdo Muudeey Xuseen.
4-Sheykh Nuur Xaaji Garweyne oo qabay gabar uu dhalay Sheykh Maxamed.
5-Cabdi Naasir Sheykh Maxamed Sh. Axmed Yare, Waxaa Dhalay Sheykh Maxamed.
6-Cali Nuur Sheykh Nuur, Waxay Ilma Adeero yihiin Sheekha. Waxaana Dhalay Sh. Nuur Sh. Axmed Yare.
7-Shariif Sheykh Ooyaaye, Waxay ilma adeero yihiin Sheykh Maxamed.
Ilo wareedyo iyo goobjoogeyaal xaadiray halka uu xasuuqqa ka dhacay ayaa noo xaqiijiyey in gabi ahaanba uu burburay dhismaha uu weerarka ka dhacay.
Sawirka Sheykh Nuur Xaaji Garweyne
Sida ka muuqata sawirada la faafiyey waxaa la soo bandhigay kaliya meydadka afar ruux oo ka mid ahaa todobada ruux ee goobta ku shahiiday iyo Hooyada reerka oo jirkeeda uu gabi ahaanba daboolnaa.
Goobjoogeyaal waxay noo sheegeen in jirka hooyada uu laba cad u kala go’ay. Sidoo kale hal qof gabi ahaanba waa la waayey oo hilbihiisa oo kaliya ayaa la arkay, halka midka todobaadna laga helay labada lugood oo kaliya.
Ciidamo Lug Ah Oo Soo Dagay Duqeynta Ka Dib.
Inkastoo Mareykanka uu sheegay in saddex gantaal oo ‘la hubo’ uu ku dhuftay dhismaha, Hadana waxaysan sheegin in duqeynta kadib ay soo dageen ciidamo gaar ah kuwaas oo dhameystiray dadkii dhaawacyada ahaa.
Ilo wareedyo waxay noo sheegeen in ciidamada Mareykanka ay soo dageen, soona galeen dhismaha ka dib markii ay duqeyntu dhacday. Waxay toogteen dadkii ka bad-baaday duqeynta oo uu ku jiray Aabihii reerka Sheykh Maxamed Sh. Axmed Yare, Allaha u Naxariistee.
Macluumaadkan waxaa sii xoojinaya sawirada la soo bandhigay oo muujinaya in dadka qaarkood ay ku taallo rasaas. Tusaale ahaan Sheykh Maxamed oo la sheegay in uu ka bad-baaday duqeynta balse ay toogteen ciidamadii soo dagay, waxaa jirkiisa ka muuqda rasaas looga dhuftay qeybaha sare ee jirka taas oo cadeyneysa in ciidamo lug ah ku soo dageen goobta kuwaas oo hubiyey in wax nool aysan ku harin dhismaha guriga. Sida warsaxaafadeedka AFRICOM lagu sheegayna, weerarku wuxuu ahaa mid la hubo oo daqiiq ah.
Weerarkan bahalnimo ee lagu Xasuuqay Qoyska Sheykh Maxamed Yare –Janada Alle Ha Ku Wada Kulmiyee- Wuxuu ahaa mid kadis ku ah dadka Muslimiinta ee ku nool degmada Jilib iyo tuulooyinka hoosyimaada balse wuxuu ahaa mid la wada filayey tan iyo markii maamulka Trump uu qeybo ka mid ah Soomaaliya u tixgeliyey Aag-dagaal, Dowladda Soomaaliyana ku raacday si loo xasuuqa dadkooda iyadoo lagu gabanayo hal ku dhigyada waxba kama jiraan ah ee uu Mareykanku ku hadaaqo.
Rasaas Ka Muuqata Qeybaha Sare Ee Jirka Sheekh Muxamed
Halkan Ka Dhageyso Ehelada Qoyskii Diyaaradaha Mareykanka Xasuuqeen.
Halkan Ka Daawo Sawirada Dadkii La Xasuuqay.